Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1212 lah
Ny fitoerana masina any an-danitra (1)
Alahady 16 Des.
Ireto teny manaraka ireto no manokatra ny filazana momba ny foto-pinoana faha-24: “Misy fitoerana masina any an-danitra – dia ilay tena tabernakely, izay naorin’ny Tompo, fa tsy olona” (jer. ny Heb. 8:2). Ny fisian’ny fitoerana masina any an-danitra (Sal. 11:4) no anankiray amin’ireo petra-kevitra ao amin’ny Baiboly milaza fotsiny ny zava-misy.
Vakio ny Heb. 8:1–5. Inona no hevi-dehibe fototra ampianarina ao amin’ireo andininy ireo?
Ny fitoerana masina tetỳ an-tany dia aseho ho tandindona, na sarin’ilay any an-danitra; midika izany fa misy ifandraisany amin’ity farany iry voalohany, eo amin’ny asany fara fahakeliny. Mampianatra antsika zavatra maro mikasika ny fitoerana masina any an-danitra àry izany ny fitoerana masina tetỳ an-tany; ka, na inona na inona mety ho hevitra fonosin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany ho an’ny firenen’ny Isiraely, ny tena hevitra fonosiny marina dia tao amin’ilay fitoerana masina any an-danitra sy tao amin’izay zavatra hitranga ao no nahitana azy. Tamin’ny alalan’ireo fanatitra sy ny asa fanompoana nataon’ny mpisorona, izay nandaitra tokoa, no nampianaran’ilay sary môdely tetỳ an-tany antsika ny mikasika ireo zava-misy any amin’ny fitoerana masina any an-danitra. Ireo asa fanompoana natao tao amin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany no fomba nampiasain’Andriamanitra hampianarana ireo foto-kevitry ny famonjena tamin’ny vahoakany, izay tandindon’ny “tena zavatra” – dia ny asa fanompoana ataon’i Kristy izany (Heb. 9:9–15), tamin’ny alalan’ny fahafatesany, ary avy eo, amin’ny alalan’ny fanelanelanana ataony ao amin’ny fitoerana masina any an-danitra.
Ny asa fanompoana natao tao amin’ny fitoerana masina tetỳ an-tany dia nampianatra fa nilaina ny ra nalatsaka (Heb. 9:22) hanavotana amin’ny fahotana, kanefa na teo aza izany dia mbola nilaina koa ny mpisorona mpanalalana ny mpanota amin’ Andriamanitra masina, vokatr’izany ra nalatsaka izany. Ny asa fanompoana nataon’ny mpisorona tao amin’ny Efitra Masina Indrindra dia nanadio ny fitoerana masina ho afaka amin’ny fahotana sy nitaky tamin’ny olona mba hiory sy hibebaka. Ny fitsarana koa, araka izany, dia nasongadina ho tena ampahany amin’ny asa famonjena manontolo.
Mahavariana ihany koa ny Heb. 8:1 sy 2, izay milaza fa ny hampitodika ny mpamaky ho amin’ny fisian’ny fitoerana masina any an-danitra sy ny toerana tanan’i Kristy amin’ny maha-Mpisoronabentsika Azy ao amin’izany fitoerana masina any an-danitra izany no tanjona kendren’ireo toko fito rehetra teo aloha ao amin’ny boky. Sarotra ny mahatakatra hoe nahoana no tsy nisy nahita ny lanja lehibe omen’ny bokin’ny Hebreo ny asa fanompoana ataon’i Kristy ao amin’ny efitra masina any an-danitra amin’ny maha-ampahany amin’ny drafi-pamonjena manontolo izany. Tsy misy ao amin’ireo andininy ireo manondro hoe ny fitoerana masina any an-danitra, indrindra moa fa ny asa fanompoana ataon’i Kristy any, dia tokony hoheverina ho fanoharana na sary an’ohatra. Ny marina dia izao, asehon’ny andininy 5 mazava fa ny fitoerana masina tetỳ an-tany – izay rafitra tena nisy, niaraka tamin’ny mpisorona tena nisy sy fanatitra tena nisy – dia tsy inona fa “aloky” ny fisian’ny asa ataon’i Kristy ho antsika any amin’ny fitoerana masina any an-danitra fotsiny ihany.